Tobabarka mashruuca horiminta JPLG ee Degmada Laascanood – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Tobabarka mashruuca horiminta JPLG ee Degmada Laascanood
Tobabarka mashruuca horiminta JPLG ee Degmada Laascanood
Gudoomiyaha gobalka sool ayaa saaka so kor meerey mashruuca hirumarinta JPLG ee gobalka sool
Subaxnimadii saka ayan kormer ku tagnay dowlada hoose ee degmada Laascaanood saan usoo indho indhayno habsami usocodka tababarka mashruuca JPLG ee horumarinta degmada.
Daardaaran iyo dhiirigelin golaha deegaanka degmada iyo shaqalaha dowlada hoose, inay mudada kooban ka faa-iidaystaan tababarka mashruuca JPLGka bulshadana uga faa- iideeyaan saan ugaadhno horumar iyo hiigsi habsami usocodka shaqada degmad.
Mayer A/casis husen wuxuu naga balan qaaday in tababarku u fulidoono sida ugu wacan si mashrucas loola qabsado ay u fulin doonan sida ugu horumarsan isago kaashanaya xildhibaanada degmada iyo shaqalaha dowlada hoose ee tatabarku usocodo.
Waa mashariicdii horumarineed ee 2020 hiigsigii iyo himilada horumarinta Gobolka Sool ee hadafka u ahayd,
madaxwayne Muuse Biixi Abdi.
Nabad horumar baaxadleh oo gobolka sool ku talaabsado insha allah.
Guddoomiyaha gobolka sool
Abdiqani maxamuud jiidhe.
Dawlada soomaaliya oo mushaharkii ka joojisey shaqaale Hargeisa Joogey
Danjire Tarsn” oo ka hadley kulan Madaxwayne Farmaajo iyo Safiirka Maraykanka...